Su'aalaha Bixiyaha ee - Adeegyada Caymiska Caafimaadka ee Gobolka Washington - CHPW
Waxaan ka jawaabeynaa su'aalaha guud, si aad waqti badan ugu lumiso bukaankaaga.
Adiga oo ah bixiyaha Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW), waxaad ku kalsoonaan kartaa taageeradayada daryeelka bukaankaaga. Raadi jawaabaha su'aalaha aad ka heli karto boggayaga bixiyaha, helitaanka tababarka iyo agabka hanuuninta, iyo inbadan.
Si aad ugu soo biirto shabakadeena, fadlan buuxi oo soo gudbi khadka tooska ah Foomka Diiwaangelinta Bixiyaha. Waxaan dib u eegi doonaa macluumaadkaaga oo kula soo xiriiri doonaa 30 maalmood gudahood. Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan la xiriir waaxdayada Xiriirka Bixiyaha ee [emailka waa la ilaaliyay].
Sideen ku heli karaa kaalmada farsamada maaraynta?
Maareeyayaasha kiiska ayaa diyaar u ah inay siiyaan caawinaad farsamo PCP-yada iyo Takhasusleyaasha xubnaha xaalad kasta leh. Taageeradan waxaa ka mid ah diyaarinta gudbinta oo ay ku jiraan caafimaadka maskaxda, SUD, Adeegyada Taageerada Muddada Dheer iyo adeegyada taageerada bulshada. Si aad u hesho adeegyadan, kala xiriir kooxda Maareynta Kiiska halkan 1-866-418-7004.
Caawinaad gaar ah, fadlan la xiriir [emailka waa la ilaaliyay].
Waxaad dib u eegi kartaa liisaska liiska si loo aqoonsado daawooyinka ay daboosho CHPW oo u baahan rukhsad siinta. Daawooyinka aan ku qorneyn liiska dawooyinkayagu waxay u baahan yihiin oggolaansho hore. Waxaad ku soo gudbin kartaa codsiyo oggolaansho hore adoo adeegsanaya boggayaga maareynta daryeelka (Jiva.)
Daawooyinka is-maamul ee u baahan rukhsad hore, fadlan kala soo xiriir Express Scripts at 1-844-605-8168 ama isticmaali https://www.CoverMyMeds.com si loo bilaabo hawsha oggolaanshaha hore.
Yaan kala xiriiraa xaalad sheegasho, oggolaansho hore, dheefaha xubinta, ama u-qalmitaanka xubinta?
Bixiyeyaashu waxay la xiriiri karaan Wakiilka Xiriirka Bixiyaha ama waxay la xiriiri karaan adeegga macaamiisha si ay uga caawiyaan 1-800-440-1561.